यी १२ कलाकार जस्ले मासु खान छाडे ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
यी १२ कलाकार जस्ले मासु खान छाडे !
सारा विश्व मानिसहरुलाई शाकाहारी बन्नका लागि आव्हान गरिरहेको छ । कैयौं संस्थाले मानिसमा शाकाहारीपन ल्याउनका लागि विभिन्न अभियान चलाइरहेका छन् ।
खानपानको सवालमा मांसहार र शाकाहारलाई दुई कित्तामा विभाजन गरिएको छ । अक्सर स्वादका पछाडि दौडनेहरु मांसहार भोजन नै रुचाउँछन् । किनभने यसबाट थरीथरीका व्याञ्जन बनाउन सकिन्छ । शरीरमा आवश्यक पोषक तत्वको अभाव पुरा गर्न पनि मासु खानैपर्ने तर्क कतिको हुन्छ । त्यसैले सन्तुलित भोजनमा मासु, अन्डालाई पनि समावेश गरिन्छ ।
तर, यहि समाजमा धेरैले आफ्नो जिब्रोलाई शाकाहार भोजनमा अभ्यस्त गराएका छन् । सर्वव्यापी धारणा के छ भने, स्वस्थ्य जीवनको लागि शाकार भोजन सर्बोत्तम हो । हाम्रो धर्म-संस्कृतिले पनि मांशहार भोजनलाई कटौती गरेको छ ।
बलिउडका यस्ता केही कलाकार छन्, जसले आफूलाई मांसाहारीबाट शाकाहारीमा परिणत गरेका छन् ।
बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनले माछा–मासु खाँदैनन् । ७५ बर्षको उमेरमा पनि आफु तन्दुरुस्त हुनुको कारण पनि शाकाहारी भोजन हो भन्छन्, अमिताभ । उनलाई भिँडीको तरकारी सबैभन्दा बढी मन पर्छ । पालक पनिर पनि उनको मनपर्ने परिकारमा पर्छ ।
कुनै समय आफूले मांसाहार गर्ने गरे पनि पछि शाकाहारी बनेको उनी बताउँछन् । ‘धर्म अथवा स्वास्थ्यका लागि मैले मांसाहार त्यागेको होइनँ, मासु खान त्यसै मन लागेन र छोडिदिएँ,’ उनी भन्छन् । शाकाहारी खाना उनलाई असाध्यै मिठो लाग्छ । ‘शाकाहारी खानाको म पारखी हुँ । चाइनिज र इटालियन भेजिटेरियन फुडको पनि म प्रशंसक हुँ,’ उनी भन्छन् ।
अभिनेता शाहिद कपूरले आफ्नो पिताले दिएको एक पुस्तक पढेपछि उनले शाकाहारी बन्ने निर्णय लिए । अभिनेताले ब्रेन हिन्सको पुस्तक ‘लाइफ इज फेयर’ पढेपछि शाकाहारी हुने निर्णय लिएका हुन् ।
अभिनेत्री करीना कपूर खान आफ्नो फिटनेसको राम्रो ख्याल राख्छिन् । त्यहीकारण उनले शाकाहारी बन्ने निर्णय लिइसकेकी छन् । उनको बुझाईमा शाकाहारी मानिसहरु बढी स्वस्थ हुन्छन् । उनलाई शाकाहारी खाना बनाउन निकै मनपर्छ । त्यहीकारण उनी घरमा बढी मात्रामा शाकाहारी खाना नै खान्छिन् । मासुको परिकार नरुचाउने हुनाले आफूसँग अफेयरमा रहेका बेला शाहिदले करिनालाई समेत शाकाहारी बनाएका थिए । करिना स्वयंले पनि शाहिदकै कारण आफु भेज बनेको स्वीकार्दै आएकी छिन् ।
मांसाहारीलाई छाडेर शाकाहारी बन्ने सूचीमा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पनि पर्छिन् । उनले आफ्नो साथीका कारण मांसाहारी भोजन त्यागेकी थिइन्, किनकी उनलाई मासांहारी मनपर्दैन थियो ।
अभिनेता आमिर खानले आफ्नो पत्नी किरण रावका कारण मांसाहारी भोजन छोडेका थिए । किरणको स्वास्थ्यमा मांसाहारी भोजनले असर देखिन थालेपछि आमिरले यो कदम उठाएका हुन् । आमिरले अब दुग्धजन्य पदार्थ पनि सेवन नगर्ने अडान लिएका छन् ।
अभिनेत्री कंगना रनावत कुनै समयमा मांसाहारी भोजनको सौखिन थिइन् । उनले सन् २०१५ मा शाकाहारी बन्ने निर्णय लिइन् । कंगना पुलाउको सौखिन छिन् । ग्रिल्ड भेजिटेबल र स्यान्डविच पनि उनले रुचाउने परिकार हो । कंगनालाई चाट निकै मन पर्छ ।
नेहा धुपिया पनि शाकाहारी हुन् । कतिसम्म भने पेटाने उनलाई केहि बर्षअघि कामुक भेजिटेरियन युवतीको उपाधी नै दिएको थियो । अभिनेत्री विद्या वालन पनि भेज कलाकार हुन् । उनको घरमा मासु समेत पाक्दैन । अभिनेत्री हेमा मालिनीलाई समेत माछा मासुको स्वाद थाहा छैन ।
ज्याकलिन फर्नान्डिज ओट्स र ब्राउन राइस मन पराउँछिन् । तिलको अचार, हरियो सलाद, विभिन्न किसिमका सुप पनि ज्याकलिनको रोजाइमा पर्छ ।
सोनम कपुर पनि पालक, ब्रोकाउली, एबोकाडो र तन्दुरी निकै मन पर्छ । नरिबलको पानी र दही भए उनलाई केहि चाहिँदैन ।
शाकाहार भोजन नै किन ?
प्रकृतिले हाम्रो शरीरका लागि आवश्यक सबै पोषक तत्व प्राप्त हुनेगरी अन्न, गेडागुडी, सागपात, फलफूल, कन्दमुल दिएको छ । यि खाद्यपदार्थहरु त्यही बेला धर्तीमा फल्छ, जतिबेला हाम्रो शरीरलाई आवश्यक हुन्छ । प्राकृतिक रुपमा उब्जनी भएको यी खाद्यपदार्थमा पर्याप्त पोषक तत्व हुनका साथै सुपाच्य पनि हुन्छ, जो हाम्रो शरीरले सजिलै पचाउँछ । जब पाचन यन्त्र चुस्त हुन्छ, खाएको कुराहरु पचाउने क्षमता हुन्छ, तब हाम्रो शरीर उर्जावान् हुन्छ ।
मांसाहारको तुलनामा शाकाहार व्यक्ति निरोगी, स्वस्थ्य, फुर्तिलो हुन्छ । उनीहरु मधुमेह, युरिक एसिड, उच्च रक्तचाप जस्ता दीर्घ रोगहरुको जोखिममा हुँदैनन् ।
– हरियो सब्जी नियमित प्रयोग गर्नुपर्छ, यसमा फोलिक एसिड भरपुर मात्रामा पाइन्छ, जसले शरीरमा हेमोग्लोबिन बढाउन सहयोग गर्छ । यसबाट क्याल्सियम, मिनरल्स पनि मिल्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधवार, साउन १३ २०७८ १८:१५:२०